कोभिड १९ को समस्या तथा युकेमा रहेका बृद्धा गोर्खाहरुले काजक्रिया खर्च नपाउने र नेपालमा सामाजिक भत्ता नपाउने – nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeभिडियो वार्ताकोभिड १९ को समस्या तथा युकेमा रहेका बृद्धा गोर्खाहरुले काजक्रिया खर्च नपाउने र नेपालमा सामाजिक भत्ता नपाउने
२६ श्रावण २०७७, सोमबार १९:०० नेसा संवाददाता भिडियो वार्ता, युके विशेष 0
आसफोर्ड । १० अगष्ट २०२० का दिन भूतपूर्व गोर्खाहरुको संगठनका नेताहरुले युकेमा रहेका बृद्धा गोर्खा र तिनका परिवारका समस्याहरु बताएका छन ।
नेपालीसमाचार डटकमको एक अनलाईन गनगन वार्तामा संगठनका नेताहरुले गोर्खाका समस्याहरु बताएका हुन । के के समस्याहरु आए? कोरोना भाइरसको महामारीले किन गोर्खाहरुलाई धेरै असर गरयो? कसरी समाधान तथा समाधानको प्रयत्न हुदैछ ? २८ दिन भन्दा बढि युके बाहिर रहेका बृद्धाहरुको युकेको सामाजिक भत्ता के हुन्छ? समस्या परेको खण्डमा कहा सम्पर्क राख्ने? कसरी भूतपूर्व गोर्खाहरुले २ अर्ब ६० करोड पैसा नेपाल सरकारलाई दिलायो? कति मरे कोरोना भाईरसको कारण युकेमा नेपालीहरु? निधन भएका गोर्खाहरुको अन्त्येष्ठि कसरी गर्नुपरयो? भूतपूर्व गोर्खाहरुले कोरोना भाइरसको महामारीमा के कस्तो सहयोग गर्दैछन? एनआरएन युकेले गोर्खाहरुको बारेमा के कसरी काम गर्दैछन? युकेमा बृद्धा गोर्खाहरुको निधन हुदा किन साफाबाट काजकिरिया खर्च किन नपाउने ? नेपालमै गोर्खाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन नपाउने भए आदि विषयमा अति महत्वपूर्ण भिडियो अन्तरवार्तामा समेटिएका छन् ।
अन्तरवार्तामा गोर्खा सत्याग्रह सघर्ष समितिका निर्देशक तथा सत्याग्रहका सर्वोच्च नेतृत्व ज्ञानराज राई, भूतपूर्व गोर्खा संघ (गेसो) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष धर्म तामाङ र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) युकेको उपाध्यक्ष तथा गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेम गाह मगर वार्तामा सहभागी बन्नु भएको छ ।
मलामी गएका धनकुटाका युवा तमोरमा नुहाउने क्रममा बगेर बेपत्ता